Xiddig ka tirsan Chelsea oo kooxda weydiistay lambarka maaliyadeed ee Eden Hazard si uu u sii joogo – Gool FM
Xiddig ka tirsan Chelsea oo kooxda weydiistay lambarka maaliyadeed ee Eden Hazard si uu u sii joogo
(England) 16 Maajo 2019. Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in ixiddig ka tirsan kooxda reer London ee Chelsea uu shuruud ku xiray wada hadalada ay saraakiisha Blues ku doonayaan inay kaga saxiixdaan heshiis cusub.
Callum Hudson-Odoi ayaa lasoo warinayaa inuu weydiistay saraakiisha kooxda Chelsea in lagu wareejiyo lambarka 10-aad ee maaliyada Eden Hazard, si uu u saxiixo heshiis cusub uu ku sii joogayo garoonka Stamford Bridge.
Laacibka reer England ayaa heshiiska uu haatan ku joogo kooxda Chelsea wuxuu soo idlaanayaa xagaaga 2020, wuxuuna ku dhawaaday inuu u dhaqaaqo Bayern Munich bishii janaayo, hadii aysan maamulka Blues ku adkeysan lahayn inuu joogo.
Hadaba 18 jirka reer England ayaa weydiistay in lagu wareejiyo lambarka 10-aad ee maaliyada Eden Hazard xili ciyaareedka soo socda, haddii ciyaaryahanka reer Belgium uu u dhaqaaqo Real Madrid sida la filayo inay dhici doonto.
Kaddib markii la xiray suuqa kala iibsiga jiilaalka ee bishii janaayo, Callum Hudson-Odoi ayaa helay fursado badan uu kaga soo muuqanayo kooxda Chelsea, wuxuuna noqday ciyaaryahan muhiim ka ah qorshaha tababare Maurizio Sarri, kahor inta uusan soo gaarin dhaawac dhanka jilibka lugta ah bishii April.
Website-ka Goal.com ayaa sidoo kale sheegay in Chelsea ay qaab wanaagsan ku jiri doonto, hadii uu sii joogo xidiga reer England garoonka Stamford Bridge, isagoo intaas ku daray in la filayo inuu codsado maaliyada Lambarka 10-aad, hadii uu Hazard kooxda ka dhaqaaqo, wuuuna dhigi doona Lambarka 20-aad uu xili ciyaareedkan kooxda u xiran yahay.
"Waan ku raaxeystay inaan la shaqeeyo xidiga kooxda Real Madrid” - Jose Mourinho
Manchester United oo soo bandhigtay maaliyadda ay xiran doonto marka ay gurigeeda ku ciyaarayso fasal ciyaareedka cusub ee 2019/20… + SAWIRRO